Oh.. My Blog!: NaCl2 PRODUCTION
လာလာလည်နေကြတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ ကိုအားနာတယ်ဗျာ- ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘာရေးရမှန်း မသိသေးတာနဲ့.. ဟဲ ဟဲ ထုံးစံတိုင်းပေါ့ နဘေးကို ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်ဂျီးပန်ကတော့ ဆားချက်တယ်တဲ့.. အဲ့လိုနဲ့.. ကျနော်လည်း ဘာမှမလုပ်တတ်သေးတော့ ဆားပဲ ၀င်ချက်လိုက် ရပါတယ်- အကြံကုန်နေသောကြောင့်- ဘယ်လိုဆားချက်ရမလည်း ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ဗျ- ဆားဆိုတာကလည်းချက်တတ်ဦးမှ- တချို့တွေကတော့ ကျွှမ်းကျင်အဆင့်ဆိုပဲ- ကျနော်ကတော့ ခပ်ပေါပေါဆားပဲ ချက်တတ်တယ်- ကျွှန်တော် ဘာတွေလုပ်နေလည်းဆိုတဲ့ ဆားတချို့ပါ- နည်းနည်းတော့ငန်တယ်- သံပုရာသီးလေးနဲ့စားရန်- (အဲ ငန်ရင်သံပုရာသီးနဲ့စား မမှားဘူး။ မစားရင် သွေးတက်တတ်တယ်။ အခွံပါရောစားရင် လေကျေတယ်။)
လုပ်စရာများ များပြားလှသောကြောင့် မည်သည့်အရာကို ဦးစားပေး လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားတုန်း မှာပင် ဘာကိုမျှမလုပ်မိ။ ထိုအခါ လုပ်စရာများသည် ပိုမို များပြားလာသည်။ အကြည်ဓါတ် ကုန်ခမ်းနေခြင်းဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာကိုမျှဟုတ်တိပတ်တိ မလုပ်ချင်သေးပါ။
-လတ်တလော ထိတွေ့မိသောပတ်ဝန်းကျင် (ဓါတ်ပုံများ)
I. အလင်းရောင်တစ်ခု။ နေရာမမှတ်မိပါ။ အလင်းကိုပင် ရွှဲရွဲစိုကျသွားအောင် ရွာချသောမိုးဟု ခံစားပြစ်လိုက်သည်။ (အမှန်တော့ ခေါင်မိုးပေါ်က ရေတွေ ကျလာတာလား မပြောတတ်ပါဘူး။ မိုးကတော့ရွာနေပါတယ်။)
II. ခြသေ့င်္ပုံသစ်သားအရုပ်။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်အရှေ့မှ။ ဟိန်းလိုက်သောအသံ တစ်သံ ကြားမိသလိုလို။ တောထဲမှာဆိုလျှင်တော့ ဘုရင်။ အကောင်ငယ်တို့ အတွက်မုဆိုး။ လူတို့၏သားကောင်။ သို့သော် မုဆိုးကိုပြန်ဒုက္ခပေးတတ်သော သားကောင်။ အခုတော့အရုပ်။ ခင်ဗျားတို့ကော မုဆိုးလား သားကောင်လား အရုပ်လား။
III. ဈေးတန်းတခု။ ဗဟန်းဈေး အပြင်ဘက်။ စားကျ အိပ်ကျ ရှာကြ နေကြ ပြီးတော့ သေကြ နေ့တဓူဝ။
IV. လမ်းမပေါ်။ ပြည်လမ်းမ။ နီးလာတာလား ဝေးသွားတာလား စုပ်ယူတာလား မှုတ်ထုတ်လိုက်တာလား။ ဟိုးအဝေးမှာ အဖြူအစ တခုတွေ့ရတယ်။
V. ပန်းလား အရွက်လား။ ရုံးရှေ့က။ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ဒီတိုင်းပဲရိုက်လိုက်တာ။
VI. စားသောက်ဆိုင်မှ ငါးရှည့်များ။ တတိယပိုင်းအစီစဉ်၏ ဘီယာဆိုင်မှ။ သနားစရာကောင်း ၍့ရိုက်လိုက်သည်။ ရိုက်ပြီးဓါတ်ပုံကို ပြန်ကြည့်မိသည်။ ပြီး ဆိုင်ထဲသို့ တချက်ဝေ့ ကြည့်လိုက်သည်။ လူများစွာ ပျားပန်းခတ်မျှစည်ကားနေသည်။ ကြည့်နေရင်းမှာပင် ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး အနီအရောင် တချက် ဖြတ်ခနဲ လက်သွားသလိုပင်။
VII. တိုက်နဲ့လ (မင်းပြောမှလား)။ နေရာ ရွှေဂုံတိုင်။ ညကိုထွက် လေ့လာခွင့်ရသော တိုက်ပိတ်ခံ အလင်းတချို့။ လကတော့ ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်လို့။
VIII. လမင်း။ ပျင်း၍ အင်္ဂါဂြိုလ် ပေါ် တက်ရိုက်ထားခြင်း။ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ။
IX. ဒါလည်း တိုက်နဲ့လ။ ရွှေဂုံတိုင်။ လ ပါတော့ လှများလှမလားလို့။ အဲ ရိပ်မိလောက်ပြီထင်တယ် အဲ့ဒီအရှေ့မှာ ဘီယာဆိုင် ရှိတယ်ဆိုတာ။
X. မောင်ပွတ်။ တတိယပိုင်းအစီစဉ်၏ ဘီယာဆိုင်မှ။ ကောင်မလေးတွေကို ငမ်းနေတာများ သရေတတောက်တောက်ကျ။ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်။ မြင်မကောင်း ရှုမကောင်း။ (မှတ်ချက်- ကြည့်ရှုရန် မသင့်လျှော်၍ ပြန်ဖျက်လိုက်သည်။ အတုယူမှားမည်ဆိုးသဖြင့်။)
-လတ်တလော အဟာရများ (အဲ. အစာများ)
မနက်- ကော်ဖီ + ခေါက်ဆွဲ
နေ့လည်- သေမှာဆိုးလို့ စားလိုက်ရသောထမင်း
ညစာ- တမင်တကာ လွတ်ထားသော မျောမိမျောရာ အတွေးများ + တမင်တကာဘီယာ + တမင်တကာ စီးကရက် (မှတ်ချက်- တချို့ရက်များသာ။ အရက်သမားကြီးလို့ အခေါ်ခံရမှာ လည်း ကြောက်ရသေးတယ်။ ချောင်းနေတဲ့လူတွေ ရှိတယ်။)
ချောင်းနည်းနည်းဆိုးတယ်။ တချို့ရက်တွေ ခေါင်းကိုက်တယ်။
-လတ်တလော ရချင်နေမှု (စိတ်ကူးယဉ်)
အတောင်ပံတစုံ (ခပ်မြင့်မြင့် ပျံသန်းနိုင်သော)
စာတွေ ဆက်ရေးဖြစ်မလား မရေးဖြစ်မလားဆိုတာ ဘယ်သူကများ အတိအကျ ပြောနိုင်မှာလည်း?
ဆက်သွယ်မှုဧရိယာ ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ခေါ်လာ၍ မရနိုင်ပါခင်ဗျာ။
-လတ်တလော သွားဖြဲချိမ်းခြောက်နေသော ကိစ္စတစ်ခု
တက်စလာ (မှတ်ချက်- ညာမပြောပါ)
ဟီး ဟီး ဟဲ ဟဲ တို့၏အနောက်။
-လတ်တလောကော အရင်တလောကော အခုတလောကော နောက်တလောကော ဒုက္ခပေးနေသော အတွေး
ဟေ့ရောင် မင်းအသက်သုံးဆယ် ပြည့်တော့မယ်။
ပုဂံနက်- ဆာဗာတွေ Configure ပြန်လုပ်နေလို့ပါတဲ့။ ပြီးရင် အံ့မခန်း မြန်လာမှာပါတဲ့။ အင်း. အားလုံးဘမ်းပြီး သုံးစားလို့ မရတဲ့ ဆိုဒ်တွေပဲ ထားခဲ့မယ်ထင်ပ။ လုပ်ကြ လုပ်ကြ။
ရိုးသားမှု၊ မခံချင်မှု၊ ပါးနပ်မှု၊ ထိုအမှုများအားလုံးကို လျစ်လျုရှုသောအမှု။
-လတ်တလော ရုံးထွက်ရန် ကြိုးစားနေသော ကိစ္စ
အထက်ပါ လတ်တလော များအားလုံး။
-လတ်တလော နားထောင်နေသော သီချင်း
ဇော်ဝင်းထွဋ္ဋ် ၏ ဂျစ်ပစီမိုးတိမ် အခွေမှ ကမ္ဘာမှာ မသေချာဘူး (ဘာမှ မသေချာဘူး?)။ ၀င်းမင်းထွေး ရေးသည်ထင်၏။
….ပြတင်းပေါက်ဖွင့် မင်း စိုက်ကာငှေး မနက်ခင်းလေးများ မြူးတူးလို့ကစား.
အပူပင်လည်း ကင်းလွတ်လပ်လို့ အထိမ်းအကွတ်မဲ့ အရိုင်းပန်းလေးများ…
ဘယ်ဆီသူတို့မျောမယ် မသိကြတဲ့ အဖြူရောင်တိမ်များ ကောင်းကင်ဝယ်.
အနာဂတ်လည်း မတွေးတတ်တဲ့ ဆီမီးကလေးများ ကလေးများပေါ့…
ဘာမှ မသေချာဘူး.. အား.. လုံးဟာမှားယွင်းနေ.
အစကတည်းက မသေချာဘူး..… အားလုံးဟာမှားယွင်းသွား…
ဟိုမှာနှစ်ယောက်တွဲ ဖြတ်ခါသွား ပြုံးရယ်စကားပြောလို့သွား..
လူတွေကြည့်လည်း ဂရုမစိုက်ဘူး.. အဲ့ဒါ စွဲမက်စရာ တပ်မက်မှုပေါ့..
လေမှာသယ်လာ အချစ်ရဲ့ မွှေးရနံ့များ. အာရုံမှာ တကယ့် . ထူးဆန်းတဲ့..
အချစ်ရဲ့ တောနက်ထဲတိုးဝင်သွား.. အဲ့ဒီမှာ မျက်စိလည် လမ်းမှားတော့……
အစကတည်းက မသေချာဘူး..အူး… အားလုံးဟာမှားယွင်းသွား…
ငါဟာငါ့တံခါး အတင်းပြန်ပိတ်.. ပြီးတော့ ငါမျက်စိမှိတ်..
တိမ်ကို အသစ်အသစ်ကြည့်ပြန်တော့.. အသိပျောက်ဆုံး မည်းနက်ဖုံး….
ရောင်စုံခြယ်ကာမှုန်းကာ တောက်ပတဲ့ အရွယ်ပျို ပွင့်ဖူး တက်ကြွခဲ့..
မာယာတွေ မသိသေး.. အတွေးအိမ်မက်..
အားလုံးဟာ….. မသေချာခဲ့လည်း….. အစစဟာ မှားလို့သွား…
ဘာမှ မသေချာတော့.. အားလုံးဟာ တကယ်ကိုမှား……….…။
အပေါ်က သီချင်း တင်မပေးနိုင်ခြင်း။ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ပါ။
Posted by Tesla at 6:10 AM